Galmee unkaa kan dirreewwan kuusdeetaa qabate bani.
Haalota gingilchaa garakeessa dirreewwan hedduu yookiin tokkootti galchi. Hubadhu: Yoo garakeessa dirreewwan hedduutti haalota gingilchaa galchite, haalotni galan hundi walsimuu qabu (Buuliyaanii AND).
Odeefannoon dabalataa waa'ee turbaa abbalaa fi ogeejjii Saxaxa Gaafattoo keessatti argamuu ni danda'a.
Yoo sajoo Gingilchaawwan Unka- Hundaa'e Fayyadami kamshaa Gingilchaa Unkaa irraa cuqaaste, gingilchaan hojiirra ni oola. Kamshaa Naannessaa Unkaa ni ilaaltee karaa kuusaawwan argamanii iyyaafachuu ni dandeessa.
Yoo qabduuClose kamshaa Form Filter irraatti cuqaaste, unkichi gingilchaa malee agarsiifama.
Naannessaa Gingilchaa Fayyadamuu
Title is: Gingilchaa Unkaatiin Barbaaduu